A Social Network maka US Navy Veterans! | Martech Zone
Tọzdee, Nọvemba 15, 2007 Tọzdee, Nọvemba 15, 2007 Douglas Karr
Afọ ole na ole gara aga, azụrụ m ngalaba ahụ NavyVets.com. Enweghị m oge ọ bụla iji rụọ ọrụ na saịtị saịtị, yabụ etinye m ngalaba ahụ Sedo.com iji hụ ma enwere mmasị na ya na iji nweta obere ad dollars. Little pụtara ihe ọ bụla nothing ọtụtụ puku hits kwa ọnwa, M na-eleghị anya nanị na-a penny ebe a na-.
Site na netwọkụ mmekọrịta na-arị elu, amalitere m ịnwale ngwungwu ịkparịta ụka n'socialntanet dị iche iche nke m nwere ike itinye na saịtị ahụ. Ebuuru m ya Elgg mana ọ bụghị ngwugwu kachasị mfe iji hazie ma rụọ ọrụ.
N'oge ahụ, amalitere m ịrụ ọrụ na logo maka saịtị ahụ. Enwere m isi ihe ngosi USN na, na-eji Illustrator, kewapụ akụkụ niile ma gbakwunye akụkụ ụfọdụ.
Fewbọchị ole na ole gara aga, amalitere m ile anya Ingmụ. Oge mbụ m hụrụ Ning afọ ole na ole gara aga bụ na mbụ Ogige Mashup. Ọ bụ ihe ịtụnanya nke sọftụwia mere ka ị dee koodu omenaala n’elu ikpo okwu ha… abụghị ngwa mgbakwunye, mana o siri ike karịa.
Ingmụ emeela netwọkụ mmekọrịta dị egwu nke dị mfe ịmeghe ozugbo na igbe ahụ! N'ezie, o were m ogologo oge iji wuo njirimara ahụ karịa ka o were iji wee nweta netwọkụ mmekọrịta!
Achọrọ m maka ụfọdụ nhọrọ ala carte nhọrọ - ngalaba nzuzo, mgbasa ozi nke m, na mwepụ nke Ning Bling niile. Echere m na ọ dị mma! Ugbu a achọrọ m ịchọta Vets ndị ọzọ nwere mmasị! Echere m na ọ bụ akụkọ mara mma - a Netwọk mmekọrịta ndị agha VeteranNwe ma na-arụ ọrụ site n'aka Onye Ọchịchị Navy!
Video: Colts.com na-eme Mgbasa Ozi vidiyo maka ndị na-akwado ya Wayzọ Ziri Ezi!
Nov 15, 2007 na 1:10 PM
Doug, ezigbo ozi, amaara m di na nwunye na-eme obere netwọkụ mmekọrịta na ha ga-esoro gị kesaa post gị!
Nov 15, 2007 na 8:18 PM
O juru m anya na ọ dị mfe iji, JD! Echere m na nhazi ahụ nwere ike iji enyemaka ọzọ, mana ọ ga-aga ebe ahụ!
Saịtị nwetara ya mbụ ndebanye n'abalị a! Woohoo!
Nov 15, 2007 na 2:03 PM
Obi dị m ụtọ ịhụ na ịmalitere ihe na ngalaba (oke ngalaba ahụ!). Anọ m na-eji Ning na IndyLance mee obere oge ma ọ dị ezigbo mma ugbu a. Ejikọtaghị m ọtụtụ ihe na njirimara ọ bụla dị elu, mana inwe ike ile ụfọdụ koodu gị anya na nnabata, ọrụ anaghị akwụ ụgwọ.
Enwebeghị m oge iji lelee Ning API ma ọ bụ ohere ya na Google's Open Social. Ah, ndepụta m na-agwụ agwụ.
Nov 15, 2007 na 8:14 PM
Ka anyị kerịta ihe edeturu mgbe anyị nwere ohere, Noa. M nọnyeere gị - ndepụta m dị ogologo karịa ike m iji mezue ọrụ!
Nov 15, 2007 na 7:46 PM
Nwoke amara nke oma, i raru ura ?!
Ọzọ ọrụ ọhụụ, bara uru sitere n'aka Doug-meister. Jisie ya!
Nov 15, 2007 na 8:13 PM
Enwere m ike ọtụtụ ụbọchị taa - enwere m akpịrị akpịrị. Ọ bụ ihe mbụ na-egosi na m na-arụ ọrụ ọtụtụ awa. Aga m ehi ụra nke ọma n'abalị a ma laghachite ya n'ụtụtụ!
Nnukwu ogbi Ahịa
Nov 16, 2007 na 8:08 PM
Nke a dị ezigbo mma. M nwere ihe karịrị a di na nwunye nke echiche maka ịkparịta ụka n'networkntanet na saịtị, na nụrụ Ning ma m nwere ma nwalee ya. Enwere m ike. Enwere m olileanya na nke a ga-amalite maka gị.
Nnukwu Ahịa Dumb
Nov 16, 2007 na 11:26 PM
Chaị! Nnọọ saịtị! Anụrụ m banyere Ning ma amaghị m otú ọ dị ike. Aga m eleba anya na nke a. Daalụ!
Nov 19, 2007 na 4:21 AM
Ndo nụ na ị na enwe nsogbu na Elgg, enwere m mmasị ịmara ebe ọ siri gị ike ịtọlite. Ihe na-agbanwe ngwa ngwa na Elgg, dịka ntọhapụ ọzọ, nke a ga-atụ anya na Disemba, ga-agụnye onye nrụnye emelitere. Na mgbakwunye, obodo ndị mmepe Elgg na-ama jijiji yana ọtụtụ ndị oku dị njikere inye aka. Yabụ, ọ bụrụ na ịchọtara mkpa ọ dị ịnye ndị otu gị ọkwa nzuzo dị elu, ma ọ bụ bido inwe obi erughị ala banyere otu ụlọ ọrụ na-ejikwa data gị niile, anyị na-anabata gị ka ị kwụsị ọzọ na Elgg.org 😉
Jisie na oru a!